विश्वकप २०१८ Archives - Khasokhas Magazine
फ्रान्सले जितेपछि यसरी उफ्रिए राष्ट्रपति
रुसको मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा क्रोएशियालाई ४-२ ले हराउँदै फ्रान्सले विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । सन् १९९८ को विश्व च्याम्पियन फ्रान्सले दोस्रोपटक उपाधि जितेको हो । टोलीले उपाधि जितेको क्षणलाई राष्ट्रपति इम्मानुयल माक्रोनले पनि यादगार बनाएका छन् । आफ्नी श्रीमती बिग्रिटीसँगै भिआईपी कक्षमा बसेर खेल हेरिरहेका माक्रोन फ्रान्स विजयी भएपछि खुसीले उफ्रिएका थिए । खेलाडीहरुले …
रसियामा सम्पन्न २१ अाैँ संस्करणकाे विश्वकप फुटवल प्रतियाेगितामा फ्रान्स विश्व च्याम्पियन बनेकाे छ। अाइतबार भएकाे फाइनलमा क्राेयशियालार्इ ४-२ गाेलअन्तरले पराजित गर्दे फ्रान्स दाेस्राेपटक विश्व च्याम्पियन बनेकाे हाे । क्रोएशियाका कप्तान लुका मोडरिचले रुस विश्वकपको गोल्डन बल अवार्ड जितेका छन् भने प्रतियोगिताको उत्कृष्ट युवा खेलाडी फ्रान्सका १९ वर्षीय केलियन एम्बाप्पे घोषित भएका छन् । यस्तै प्रतियोगिताको …
यी हुन् विश्वकप २०१८ मा ८ देखि ३८ मिलियन अमेरिकी डलर जित्ने देश, कोही फर्केनन् खाली हात
आइतबारको विश्वकप फाइनलमा फ्रान्स विश्वविजेता बन्न सफल भयो । यसको अर्थ फ्रान्सले पुरस्कारका रुपमा ३८ मिलियन अमेरिकी डलर जितेको छ । यो रकम फ्रान्सको नेशनल फिफा फेडेरेशनमा जानेछ, त्यसपछि कुन खेलाडीले कति पाउने भन्ने टुंगो लगाइनेछ । विश्वकपमा दोश्रो स्थानमा बनाउन सफल क्रोएशियाले पनि नगद पुरस्कारका रुपमा २८ मिलियन डलर जितेको छ । तेश्रो स्थान …
२० बर्षपछि फ्रान्सले जित्यो विश्वकप
विश्वकप फुटवलमा फ्रान्स विश्वविजेता बनेको छ । क्रोएशियासँगको फाइनल खेलमा चार गोल गर्दै फ्रान्सले विश्वकप जितेको हो । फ्रान्सले यस अगाडि सन् १९९८ मा विश्वकप फुटवल जितेको थियो । त्यसको २० बर्षपछि फ्रान्स फेरी क्रोएशियालाई हराउँदै विश्वविजेता बनेको छ । विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलको १८ औं मिनेटमा फ्रान्सले क्रोएशियाबिरुद्ध पहिलो गोल गरेको थियो । त्यस लगत्तै क्रोएशियाले २९ …
विश्वकप : यसरी भए आजका तीन गोल (भिडियो)
विश्वकप फुटबलको आजको फाइनल खेलको १८ औं मिनेटमा फ्रान्सले क्रोएशियाबिरुद्ध पहिलो गोल गरेको थियो । Rough start for Croatia! Mandzukic heads it into his own net to give France the 1-0 lead. pic.twitter.com/LxNebIaASA — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2018 त्यस लगत्तै क्रोएशियाले २९ औं मिनेटमा गोल फर्काएको थियो । Ivan Perisic equalizes! His shot …
एम्बाप्पे र क्रोएशियाका स्टार मोडरिच आमने सामने, एम्बाप्पेको तीब्र बेग मोडरिचले राेक्लान्?
मस्कोको लुजनिकी स्टेडियममा आइतबार बेलुका २१ औं विश्वकपको उपाधि उचाल्न फ्रान्स र क्रोएशिया आमनेसामने हुँदा विश्वभरका मानिसहरुको आखाँ टेलिभिजन सेटमा अडिनेछन्। दुई राष्ट्रहरु भने इतिहासको किताबमा आफ्नो नाम लेखाउँदै विश्व च्याम्पियन बन्ने होडमा हुनेछन्। फ्रान्स र क्रोएशियाबीच रोमाञ्चकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। फाइनलमा फ्रान्सका किशोर फरवार्ड केलिएन एम्बाप्पे र क्रोएशियाका स्टार मिडफिल्डर लुका मोडरिच आमने …
क्राेएसिया- पहिलाेपटक फाइनल पुगेकाे खुसियालीमा मन्त्रिपरिषदकाे बैठक जर्सी लाएरै बस्याे
इतिहास रच्दै पहिलाेपटक विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको खुसियाली मनाउँदै क्रोएसियाकाे मन्त्रिपरिषद् बैठक राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले प्रयाेग गर्ने जर्सी लगाएरै बस्याे । बुधबार राति भएकाे सेमिफाइनल खेलमा इंग्ल्यान्डलार्इ हराउँदै फाइनलकाे यात्रा तय गरेपछि क्राेएसियाकाे मन्त्रिपरिषद बैठक बिहीबार जर्सी लगाएरै बसेकाे हाे । क्राेएसियाकाे मन्त्रिपरिषदले उक्त जितलार्इ राष्ट्रिय जितकाे रूपमा मनाएकाे हाे । यसरी देशकै मन्त्रिषद्ले राष्ट्रिय …
क्रोएसिया इतिहास रच्ने लक्ष्यमा, दोस्रोपटक उपाधि उचाल्न आतुर फ्रान्स
रुसमा जारी सन् २०१८ विश्वकपको फाइनल आज हुँदै छ । नेपाली समय अनुसार राति पौने ९ बजे फ्रान्स र क्रोएसियाबीच मस्कोको लुज्हनिकी रंगशलामा फाइनल खेल हुँदैछ । क्रोएसिया विश्वकप फाइनलमा पहिलो पटक उपाधि चुमेर इतिहास रच्ने लक्ष्यमा रहेको छ भने तेस्रो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको फ्रान्स दोस्रो पटक विश्वकप विजेता बन्न आतुर रहेको छ । …
इंग्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम पहिलोपटक विश्वकपमा तेश्रो भएको छ । तेश्रो स्थानका लागि सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशालामा भएको खेलमा इंग्ल्याण्डलाई २-०ले पराजित गर्दै तेश्रो स्थान बनाउन सफल भयो । फ्रान्ससँग सेमिफाइनलमा पराजित भएको बेल्जियम र क्रोएसियासँग पराजित भएको इंग्ल्याण्ड दोश्रो पटक आमने–सामने भएका हुन् । खेलको ४ मिनेटमा नै गोल गर्दै म्युनियरले सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए …
२०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आइतबार सन् १९९८ को च्याम्पियन फ्रान्स र पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउने क्रममा क्रोएसियाले सानदार खेल पस्कियो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले क्रोएसियाको खेलको प्रसंशा गर्दै क्रोएसिया उपाधि लायक हुनुका तीन कारण दिएको छ। १‍.चमत्कारिक टिम र उच्च आत्मबल प्रशिक्षक जेटलाट्को डालिकले …